BPC-157 Fanampiny: Ahoana no hametrahana BPC-157 na mandray BPC-157 am-bava?
1. Inona no atao hoe BPC-157 (137525-51-0)?
2. Inona no miasa amin'ny vatan'ny BPC-157?
3. Ny tombontsoa BPC-157
4. BPC-157 fampiharana amin'ny tsena
5. Zarao ny exprience rehefa ampiasaina BPC-157
6. Ahoana ny fampiasana BPC-157?
7. Fampitandremana amin'ny BPC-157
Ny BPC-157, izay antsoina ihany koa hoe PL 14736, PL 10, ary PLD-116, dia iray amin'ireo karazana peptides maro hita ao amin'ny tsena fanampiny. Na izany aza, inona no mampiavaka azy amin'ny mpifaninana aminy, dia ny nanala azy avy amin'ny proteinina proteinina amin'ny gastrointestinal.
BPC-157 dia pentadecapeptide izay singa 15 asidra amine hita ao amin'ny jasan'ny atin'olombelona. Efa hita fa ny BPC-157 dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanasitranana ny ratra isan-karazany naterak'ilay vatana, saingy ny ankamaroany dia naneho vokatra be dia be tamin'ny fanasitranana fanasitranana. Izy io dia fiarovana amin'ny proteinina izay natao voalohany tamin'ny fanampian'ny aretina entina amin'ny tsinay ary koa ny fery maloto avy amin'ny taovam-pisefoana. Na izany aza, miaraka amin'ny fikarohana tsy tapaka dia nanamarina fa ny toetra fanasitranana ny BPC-157 dia tsy voafetra ary afaka manampy koa amin'ny fanasitranana intestinal ankoatra ny famerenana hozatra amin'ny tendon.
Na dia ilaina aza ny fikaroka fanampiny mba hanamafisana ny fahaizan'i BPC-157 amin'ny fanasitranana maromaro amin'ny vatana, misy porofo ampy mba hanamafisana fa misy fiantraikany tsara eo amin'ny fitomboan'ny angiogenesis. Ny Angiogenesis dia manondro ny fizotry ny rà mandriaka ao amin'ny vatana ary mitana andraikitra manan-danja amin'ny fanasitranana vatana.
Ny fikarohana momba ny BPC-157 (137525-51-0) dia efa nanomboka hatramin'ny 1991 ary ny vokatr'izany dia manondro fa ny peptide dia afaka manamboatra ratra nify, taolana, hozatra, tendona, ary tsinay mihitsy aza. Io tahirin-kevitra io dia mifototra amin'ny fitsaboana amin'ny vitaminina sy ny fianarana amin'ny viva natao tamin'ny mpivarotena sy ny olombelona. Ny sasany amin'ireo fitsapana ataon'ny olombelona dia ny famongorana ny peptide eo ambanin'ny hoditra (manara-penitra) ary ao amin'ny hozatra (intramuscularly).
Ny mpahay siansa dia mamantatra ny BPC-157 ho toy ny "pestadecapeptide" miorina ao amin'ny tranombakoka, noho ny fahaizany miteraka fitoviana amin'ny sira mipasaka. Naseho koa ny fikarakarana ny fery, ny aretina entina amin'ny tsina-tsinahy ary ny trakta GI ambony sy ambany ary mahavariana. Ny ampahany tsara indrindra dia ny BPC-157 dia tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny lafiny hafa!
Ireo fianarana voalaza etsy ambony dia mampiseho izany BPC-157 dia miasa Mahafinaritra rehefa mahasalama ny fanasitranana ny ratram-po. Amin'ny alàlan'ny fifandraisana tsara amin'ny rafitra Nitric Oxide (NO), ny BPC-157 dia manampy amin'ny fikarakarana ratra amin'ny fananganana ny fantson-dra ary miaro ny tavy endothelial. Mampiroborobo ny fanehoan-kevitra an-tserasera ihany koa izy raha mikendry manokana ny fototarazo izay tompon'andraikitra amin'ny famolavolana ny kolagai, ny fitomboan'ny fitomboan'ny toetrandro sy ny cytokine. Azo atao koa ny manasitrana ny anastomose amin'ny tsindry ary ny sendikàn'ny tsinay kely. Ireo toe-javatra voalaza etsy ambony ireo dia fantatra fa hisy fiantraikany amin'ny aretin'ny tsindrona tsindrona, ny aretim-pivalanana, ny fikorontanana ary ny fanaintainana. Ireo vokatra tsara ireo dia voamarina na dia teo amin'ny fepetra nahatratra ny dingana efa nisy aza.
▪ Manamboatra ny atidoha
▪ Miaro amin'ny voka-dratsin'ny zava-mahadomelina
▪ Mamerina ny Rafi-pitaterana Serotogenic
▪ Arovana ny rafitra Dopaminergic
▪ Fanamafisana Ny rafitra GABAergic
▪ Mamadika ny fandeferana
▪ Miaro ny fo
▪ Hamarana ny fanarenana ny vatana
▪ Manampy amin'ny tsy fahasalamana sy viriosy
▪ Hanampy aretina mampidi-doza
▪ Manampy amin'ny areti-mifindra
▪ Afaka manampy ny fakana am-bava
▪ Afaka manampy amin'ny tsy fanontanianao haingana
(1) BPC-157 ho an'ny BodyBuilding
Ny anjara asa manan-danja indrindra amin'ny kilalao BPC-157 dia ao amin'ny fambolena. Ny teboka lehibe tompon'antoka amin'ny famokarana collagen sy Angiogenesis dia ny lamba famonosana. Ny fananganana fiaramanidina na angiogenesis dia mety hitaredretra raha misy ny ratra na ny fahanterana. Matetika, rehefa mihantitra ny bodybuilders, mila ny fanohanana ny famerenana ny dingan'ny angiogenesis izy ireo ary noho izany dia ampiasaina ny BPC-157. Araka ny fiorenana, ny BPC-157 dia mitana toerana ambony amin'ny fanasitranana ho an'ny hozatra sy tavy izay mampihena ny fanaintainan'ny mpamboly sy mpihazakazaka be. Maro amin'izy ireo no mijoro ho vavolombelona fa nahomby io fanafody io tamin'ny fanafoanana ny fanaintainana.
(2) BPC-157 amin'ny Supplements
Ny BPC-157 dia tsy zava-mahadomelina vao haingana, fa noho ny toetra mampiavaka azy dia tsy mbola nampiasaina tamin'ny lasa. Na izany aza, manomboka mampiseho ny endriny eo amin'ny tontolon'ireo fanafody. Na dia tsy ampiasaina amin'ny endriny samihafa aza izy io, dia ampiasaina ho toy ny zavatra azo ampiasaina ao anaty ampahany vitsivitsy amin'ny fanampiana ara-tsakafo. Tsy mahasoa afa-tsy ny famerenana amin'ny laoniny ny taolana sy ny hozatra, fa koa ny fisorohana ny aretina isanisany.
Ny zava-dehibe iray hafa momba ny BPC-157 dia satria satria mampihena ny fanaintainan'ny fiarahamonina izany dia azo ampiasaina koa ny olon-dehibe zokiolona izay efa zatra mihamitombo kokoa. Hanampy amin'ny fanaraha-maso ny fanaintainana vokatry ny vatany efa antitra.
Amin'ny voalohany dia mampiasa ny BPC-157 aho noho ny rafi-pihariana biliary sy ny tsirin-tsakafo, saingy hitako fa misy vokany hafa amin'ny rafitra. Noraisiko an-tsokosoko fotsiny izany ary nanampy ahy tamin'ny torimaso, ny fahatsiarovan-tena ary ny tsy fahampian-tsakafo. Mila doka kely fotsiny aho (~ 50mcg). Nahatsikaritra ihany koa ny fampitomboana ny histamine ao anaty ranon-tsaviko avy aminy (mety ho ao anatin'ny dingam-panavaozana). Hanandrana izany aho tsy ho ela noho ny olana ateraky ny atidoha amin'ny CIRS (intranasally or injected).
Ny olona sasany fantatro dia noraisiko manontolo na amin'ny ankapobeny (toy ny maso kely) ary niasa. Ny hafa dia nitatitra fa manampy tokoa ny fiasan-dry zareo, ny fitsaboana amin'ny ratra, ny anthieonia, ny fahaketrahana, ny IBS, ny fanahiana ary ny Post Orgasmic Syndrome Syndrome (mba hilazana ny vitsivitsy).
Ity ny fahitako sy ny fanantenako hahita ny fikarohana amin'ny: Tiako ny hahafantatra ny fomba fiasan'ny BPC-157 amin'ny fifangaroan-tsolika ao amin'ny tsipika sy zonulin-1 (ZO-1), na ny vokany amin'ny fivarotany mikraoba sy mikraoba sy peptides dia toa mamerina karazana aretina mifandray amin'ny dysbiosis.
Azo atao amin'ny fomba roa ny BPC-157:
Misy karazany roa ny fomba fitsaboana: intramuscular ary Subcutaneous. Ny fampidirana entramuscular dia ampiasaina eo akaikin'ny hozatry ny fanaintainana. Amin'ny fanindroany azy lalina ao anatin'ilay tazakely dia ho afaka hanome BPC-157 amin'ny vatanao ianao amin'ny fanasitranana. Ny fomba hafa dia ny fampidiran-toaka manara-penitra izay ampiharina eo ambanin'ny hoditra. Samy hampiasa fitaovana izy ireo.
Raha te haka azy amin'ny orana ianao, dia tsy maintsy mipoitra ny vombony eo am-bavanao amin'ny alalan'ny taratra. Io fomba io dia tokony atao amin'ny fikarakarana tsara mba hisorohana ny ratra amin'ny vava.
(1) BPC-157 Injection
Ahoana ny fomba hahazoana ny BPC-157 amin'ny aterineto?
Afaka mividy BPC-157 amin'ny marika vitsivitsy ianao Peptide Suppliers amin'ny Internet. Mampitandrina anao aho: karazana toy ny fialana amin'ny aterineto, tranokala dia mena, ary tsy navela hividy na hamoaka ireny karazana peptides ireny izy ireo ho toy ny zavatra mety ho an'ny fanjifana na ny tsindrona amin'ny olombelona, ​​fa afaka mahita azy tsara ianao ary mividy BPC-157 raha fantatrao ny fomba ampiasanao ny fahaiza-manao Googling araka ny tokony ho izy.
Tsy azoko ambara fa ny iray amin'ireo endriky ny BPC-157 ireo dia "ambony" satria tsy misy ara-dalàna ny fivarotana amin'ny fampiasan'ny olona (tsikaritrareo ny tranonkala tsirairay fa ny fikarakarana simika ao amin'ny laboratoara fotsiny ihany) fa ny sary 'd hanome safidy vitsivitsy raha ny iray amin'ireo vohikala etsy ambony dia tsy tafapetraka amin'ny fotoana ahafahanao mamaky ity lahatsoratra ity.
Noho ny antony izay hahalalanao azy, izaho ihany koa Buy BPC-157 avy any Phcoker ary mahazo valiny tsara.
WHatao inona ny tokony hataonao alohan'ny hamoahana BPC-157?
① Ny boaty kely misy tsiranoka amin'ny insuline, indrindra ny 1ml / 1cc, ary ny 28 gauge 1 / 2 mirefy sampy (eo amin'ny tsongan-tsavily ho an'ireto serfes) ireto, dia ny "pine slip".
② Tavoahangy bakteriostatic iray misy tavoahangy 30ml.
③ Fanafody fanadiovana alikaola iray.
Ahoana ny famafana ny BPC-157?
① Haleo ny fonosana amin'ny BPC-157 sy BAC.
② Ny alikaola amin'ny alikaola dia mampitsahatra ny fingotra tampoka ao amin'ny BPC-157, ary avelao ho maina izany. Izany koa dia mandeha amin'ny bac.
③ Hamafiso ny fatran'ny BAC. Raha sendra misy tavoahangy 30ml ny BAC, raha toa ianao ka mameno tavy enina feno ranom-boasarimakirana, dia marefo tsikelikely (peptides tena marefo) ny tsiranoka tsirairay ao anaty tavoahangy 5mg amin'ny BPC-157, dia ho tonga haingana ianao Fenoy ny tavoahangy 5mg amin'ny BPC-157.
④ Raha vantany vao feno ny tavoahangin'i 5mg ny BPC-157, dia mifototra amin'ny Peptide Mixing & Dosing Calculator, isaky ny mametraka ny angatra 1ml / 1cc ao aminy ianao ary manintona ilay tsipika miverina amin'ny tsipika fahadimy ambin'ny folo, dia handeha ianao Miangavy anao ny 250mcg amin'ny BPC-157.
Ahoana ny fametrahana B-157 aorian'ny fampifangaroana?
Alohan'ny aorian'ny fanorenana indray, dia arovy ny BPC-157 miala amin'ny UV, ny hazavan'ny masoandro ary ny hafanana. Hijanona ho miorim-paka ao anatin'ny fandriam-pahalemana mandritra ny folo herinandro izy, fa raha ny fitehirizana sy ny vokatra tsara indrindra, dia tokony hikaroka ao amin'ny vata fampangatsiahana ianao, ka amin'izany dia hijanona maharitra mandritra ny enim-bolana. Hijanona ho miorim-paka ao anaty frizidera mandritra ny roa taona.
Ny zavatra dia tena marefo. Tsy vitako ny manantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fananganana indray ny lalam-panorenana. Rehefa mamafy ny BAC ao amin'ny BPC ianao, dia tadiavo ny sisin'ny tavoahangy BPC, ary aza mitsimoka mivantana ny vovobony BPC. Rehefa misintona ny BPC ho ao anaty fitiliana ianao amin'ny fampidirana na fampiasana am-bava, dia avereno amim-pitandremana ny tavoahangy BPC ary alaivo moramora moramora ny ranomandry. Rehefa manisy tsimoka ianao na mamafy izany ao am-bavanao, dia manaparitaka azy tsikelikely. Raha mitazona azy ao amin'ny vata fampangatsiahana ianao, dia arovy amin'ny zavatra mety handondona azy io na hianjera izany.
Ahoana ny fametrahana BPC-157?
Ny fomba fanasitranana dia ny mangidy indrindra sy faran'izay mampangirifiry indrindra satria mitaky ny fampidirana ilay tsimokaretina eo ambanin'ny hoditra, ary indrindra eo amin'ny faritra iray akaikin'ny ratra na fanaintainana araka izay azo atao.
♦ Intramuscular injection
Azonao atao ihany koa mametraka BPC-157 Tsy misy dikany izany, izay midika hoe manindrona ny fanjaitra hiditra ao amin'ny tazomoka. Mazava ho azy fa fomba fanao maharary izany, indrindra rehefa heverinao fa matetika no atao any amin'ny faritra izay akaikin'ny ratra izany.
♦ Mialà eo amin'ny vavanao BPC-157
Ny fomba mora indrindra dia ny manaparitaka ny peptide ao am-bavanao. Ataovy azo antoka fa mitazona ny ranona ao anatin'ny vavanao mandritra ny 90 ka hatramin'ny 120 segondra alohan'ny hidona.
Raha mahomby amin'ny fanjaitra ianao dia afaka misafidy foana ny fanjaitra an-kibo. Ny zava-drehetra tokony hataonao dia manindrona ny faritra manodidina ny hoditra faran'izay haingana amin'ny ratra, ary manome antoka ny fanjaitra mba hahatonga azy io ho toy ny "ravina" eo ambanin'ny faritra misy ny hoditra izay nokapainao ary tsy nipoitra mivantana. . Mety ho sarotra ny manao izany ka mety ho tsara hevitra ny olona iray hanampy anao hiaraka aminy. Aza hadino ny mampiasa toto-drongony mba hanadiovana ny faritra manodidina ny hoditra izay efa hotsarainao, ary koa ny fingotra fingotra mialoha sy aorian'ny fisotroana.
Ny fomba faran'izay maharary na dia mahomby izay azonao atao aza dia ny fampidiran-dresaka. Tahaka ny injections amin'ny antsipiriany, io fomba fanao io dia mitaky ny fanadiovana ny fingotra fingotra sy ny ampahan'ny hoditra izay efa tsindrianao amin'ny tavy alikaola. Na izany aza, dia manindrona ny hoditra amin'ny fanjaitra ianao fa tsy miasa tahaka izany amin'ny fomba itondranao azy. Ataovy ao an-tsaina fa hampiasa ny fanjaitra ianao raha toa ka azo atao, akaikin'ny faritra voajanahary, izay mety hanampy amin'ny fanaintainana. Saingy, mieritreritra ny soso-kevitra sambatra fa nasiana fanampiana amin'ny toe-javatra sasany, na dia tsy azontsika antoka aza ny fahombiazan'io fomba io. Amin'ny lafiny mamirapiratra, io fomba io dia ahafahan'ny peptide miasa haingana ary manatsara ny fahasitranana.
(2) Oral BPC-157
Oral BPC-157: Ny dosie BPC-157 mahomby
Zava-dehibe ny mitadidy fa mbola misy ny fanafody vao haingana izay mihamatotra amin'ny fotoana. Izany no mahatonga ny dosage tsy hajanona, fa tombanana fotsiny. Ny tanjon'ny olona iray mavesatra 250 dia afaka mitondra 180μg, 110ug amin'ny lanjan'ny 200 lbs sy 6μg ho an'ny 150 lbs. Manolo-kevitra ny hametrahana dosage prescriptions mba hamitana ny tsingerinao.
Ny BPC-157 dia aseho ho azo antoka amin'ny fitsapana fitsaboana amin'ny aretina entina amin'ny tsimokaretina (PL14736), azo antoka amin'ny fitsaboana aretin-tsolika, ary amin'izao fotoana izao dia ao amin'ny fitsapana amin'ny aretina sclerosis.
Ao amin'ny ankamaroan'ny fanadihadiana, ny BPC 157 dia mampiseho haingana sy mahasoa (hatramin'ny andro voalohany) eo amin'ny level cellular.Coritcosteroids dia mety hampihena ny fahaizana BPC-157 amin'ny fanasitranana ny hozatra. Satria ny proangiogenic dia mety hampitombo ny homamiadana. Ny zava-mahadomelina indrindra, ny fampitandremana BPC-157 dia tokony horaisina amim-pahamendrehana.
Rehefa avy namaky ilay lahatsoratra ianao dia mety manontany tena anao hoe nahoana no tsy nisy nanambara anao momba ity peptide mahagaga ity.
Ny iray amin'ireo olana dia ny hoe ny BPC-157 (137525-51-0) dia tsy azo patentika izay midika fa ny orinasa pharmaceutique dia tsy mahazo vola avy amin'izany. Na ny dokotera aza mety tsy mahafantatra an'izany satria tsy natao tsenam-barotra izany, ary satria tsy fehezin'ny FDA, ny BPC-157 ara-teknika dia tsy omena hivarotra ny fampiasan'ny olona. Ary na izany aza, tsy misy ny hoe BPC-157 dia singa voajanahary voajanahary voajanahary.
Ny vaovao tsara dia ny tsy nandraisan'ny BPC-157 vondrona fitantanana ara-panatanjahantena toy ny WADA sy USADA. Midika izany fa ny atleta sy ny mpandàla biriky dia mbola afaka mandray izany ary mandray soa avy amin'ireo toetra fanasitranany. Fa ny tsy fahampian'ny fianarana amin'ny fotoana maharitra amin'ny BPC-157 dia midika fa misy ny mety hisian'ny fandraran'ireo vondrona governemanta amin'ny hoavy.
Na izany aza, BPC-157 dia tsara ho azo antoka, satria tsy misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fitsaboana amin'ny fotoana fohy izay efa natao hatramin'izao. Noho izany raha manana olana ianao amin'ny firoboroboana tsara, ny ratra na ny fepetra voalaza ato amin'ity lahatsoratra ity, dia azonao atao ny mihevitra azy io ho endrika fitsaboana.
2019-05-09 ao amin'ny 10: 27 pm
"Nasaina ny olona iray izay mavesatra 250 lbs dia afaka mitondra 180ug, 110ug amin'ny lanjan'ny 200 lbs ary 6ug amin'ny 150 lbs. Tokony homena dosie omena ianao mba hamitana ny tsingerinao. "
Azafady azafady ity sazy ity.
Soraty koa ny "micrograms" raha azonao izany.
2019-05-13 ao amin'ny 1: 56 am
Misaotra ny fampahatsiahivanao!
Hanitsy ny teny tsy ho ela isika, mikrograma (μg).
Aza misalasala milaza amintsika raha mahita fahadisoana hafa momba ny lahatsoratra.
Izany dia ho ankasitrahana!
7 Tsiambaratelo manan-danja momba ny fampiasana ny fampiasana ny fampiasana azy, fantatrao ve?
2019 farany fihenan'ny anti-aging: Nicotinamide Mononucleotide (NMN)